Momba anay - TMTeck Instrument Co., Ltd.
TMTeck Instrument Co., Ltd. (aorian'izay: TMTeck) dia mpanamboatra sy mpamatsy NDT malaza any Beijing China ary manome teknolojia vaovao sy fahaiza-manao feno hanasoavana ny mpanjifa any amin'ny firenena maro eran'izao tontolo izao. eo amin'ny sehatry ny vahaolana fanaraha-maso tarihan'ny haitao izay manome vokatra, kalitao ary fiarovana.
Nanomboka tamin'ny Ultrason Transducers sy Coating Thickness Gauge, izao TMTeck dia namorona andiam-panandramana maherin'ny 10, anisan'izany ny Ultrasonic Flaw Detector, Coating Thickness Gauge, Hardness Testers, Ultrasonic Thickness Gauge, ny kojakoja ary fitaovana NDT hafa. Ireo vokatra ireo dia be mpampiasa amin'ny famakafakana ireo fitaovana ahafahan'ny mpanjifantsika manara-maso, mifehy ary manamarina ny fizotrany sy ny fampiharana azy ireo, ary koa ny entantsika manana mari-pahaizana CE.
TMTeck dia manolo-tena amin'ny fikojakojana fiaraha-miasa maharitra amin'ireo mpanjifanay amin'ny alàlan'ny fanolorana serivisy tsy manam-paharoa, torohevitra ary fanampiana. Izahay dia mamolavola sy mamokatra karazana fitaovana sy kojakoja avo lenta avo lenta NDT. Miaraka amin'ny fanamafisantsika hatrany ny fifantohan'ny mpanjifa sy ny fifaninanana manerantany, TMTeck dia iray hatrany amin'ny laharana voalohany amin'ny orinasa manerantany raha toa ka mitarika amin'ny fitaovan'ny NDT. Ary izahay dia mamorona vokatra andian-dahatsoratra vaovao mifanaraka amin'ny fangatahan'ny tsena. Afaka manome antoka tsara ho an'ny mpanjifanay izahay.
Raha toa ka iharan'ny fanararaotana, lozam-pifamoivoizana, fanovana, fanovana, fanodikodinam-pahefana, fanararaotana, na fanamboarana na fanompoana na iza na iza tsy nahazo alalana hanome izany serivisy izany, na tsy nanana ny karatra fiantohana, ny orinasanay dia tsy ho tompon'andraikitra amin'ny fanamboarana.
Raha toa ka takiana ao anatin'ny fe-potoana antoka ny vokatra (ankoatry ny kojakoja tsy fanamboarana), dia andefaso ny vokatra hiverina amin'ny fanamboarana amin'ny alàlan'ny karatra fiantohana. Raha tara loatra ny datin'ny fahasimban'ny vokatra dia hitaky vola amin'ny fanamboarana ny orinasanay.
Ny vokatry ny orinasanay dia azo amboarina maimaimpoana ao anatin'ny roa taona. Ary koa ny fanamboarana ny fiainana manontolo ny mpamokatra.
Fifantohana amin'ireo mpampiasa
Tokony hameno ity karatra ity ny mpampiasa ary handefa any amin'ilay orinasa nividy ny vokatra, raha tsy izany dia tsy azo amboarina maimaimpoana ilay vokatra.
Niorina ny TMTeck Manufacturing Limited, ny karazana vokatra voalohany natombokay tamin'ny nahomby– andiam-pandrefesana ny hateviny
andiana detector lesoka ultrasonic no mivoaka, mankafy laza ambony any amin'ny firenena eropeana sy amerikanina.
andian-dahatsoratra Leeb Hardness Tester tonga soa aman-tsara any an-tsena, nohavaozina mafy ny tsena ..
ny orinasanay Beijing TMTeck Instrument Co., Ltd dia natsangana ..
ny vokarin'ny sainam-pirenena --Ny teknolojia matevina ultrasonika dia nivoatra tamim-pahombiazana, nitondra ilay fampisehoana mihoatra ny iray tapitrisa.
namolavola tamim-pahombiazana ny haitao mba hanaovana ny karazana probe rehetra ultrasonic izay afaka mamaly ny filan'ny GE, OLYMPUS ary ireo zavamaneno any andrefana hafa.
ny orinasanay Nifindra faritra indostrialy vaovao, atrikasa famokarana dia 300m ², nampitombo be ny fahaizan'ny famokarana.
ny karazana sensor ivelany vaovao Roughness Tester TMR360 dia niditra an-tsena tamim-pahombiazana Ary nahazo laza malaza amin'ity orinasa ity.
raha te hihaona amin'ny filan'ny mpanjifa amerikana avaratra dia nanamboatra famotopotorana andian-DA sy vera vita amin'ny kristaly tsy azo esorina izahay, izay manana fahatsapana avo kokoa noho ny an'ny GE.
izahay dia manolo-tena amin'ny fikarohana sy fampandrosoana ny eddy amin'izao fotoana izao detector lesoka detector, ary tsy ho ela dia handefa indostrialy feno-digital eddy detector lesoka ankehitriny izay mifanaraka amin'ny fenitry ny EU EN1711-2000 sy ny fenitra nasionaly GB / T26954-2011.
TMTeck dia manolo-tena amin'ny fikojakojana fiaraha-miasa maharitra amin'ireo mpanjifanay amin'ny alàlan'ny fanolorana serivisy tsy manam-paharoa, torohevitra ary fanampiana.
Calibration Test Block, Calibration Blocks, Pipa fanamafisam-peo, Telegrama ultrason transducer, Ut Block Block, Bara fanamafisana ultrasonika,